Siddeed maalmood oo kaliya ayuu haystaa si uu shaqadiisa u badbaadsan karo, haddii uu shuruuddaas kasoo bixi waayana waxa qaadi doonta seefta.
Tababare Thomas Tuchel ayaa la sheegay in kooxdiisu ku wargelisay in go’aanku gacantiisa ku jiro, sidoo kalena mustaqbalkiisa kooxdu ku xidhan yahay natiijooyinka uu ka keeno kulamada siddeedda maalmood ee foodda iangu soo haya.
Kooxda reer France oo saddex bilood laga joogo maalintii ay ciyaartay finalkii Champions League ee xili ciyaareedkii hore, waxay hadda ku jirtaa xaalad hubanti la’aan ah oo ay halis ugu jirto inay wareegga ugu horreeya ku hadho xili ciyaareedka, taasina waxay keentay in Tuchel loo sheego inuu fursad u haysto siddeed maalmood.
Boodhka sare ee maamulka kooxda ayuu warku sheegay inay la hadleen Thomas Tuchel, fartana laga saaray go’aan ah inuu haysto siddeed maalmood oo natiijooyinka ugu weyn ee laga doonayaa ay tahay inuu ka adkaado labada kooxood ee RB Leipzig oo ay caawa kulmayaan iyo Istanbul Basaksehir oo ay usbuuca dambe foodda is-dari doonaan si ay uga sare maraan RB Leipzig iyo Manchester United oo hadda kaalmaha koowaad iyo labaad ee group-kooda ku kala jira.
Kooxda reer France ayaa haddii ay awoodi weydo inay guulo ka keento ciyaarahan, waxay kasoo muuqan doontaa tartanka Europa League oo ay Arsenal iyo Tottenham ugu tegi doono.
Tartanka Champions League oo kaliya maaha meesha uu culaysku ka saaran yahay Thomas Tuchel, hase yeeshee horyaalka Ligue 1 oo ay ku hoggaaminayaan 24 dhibcood, waxa soo qaban karaysa Marseille oo laba ciyaarood gacanta ku haysa haddii ay labadaas kulan guuleysato.
Culayskan ayaa waxa sii siyaaday Jimcihii toddobaadkan oo iyagoo 2-0 ku hoggaaminaya Monaco qaybtii hore, haddana lagu garaacay 2-3 iyadoo saddexdaba laga daba keenay.
Maamulka Tigreega oo sheegay in ay hubaynayaan shacabka